BIM - Adduunkii aan ku riyoon lahaa 20 sano ka hor - Geofumadas
Febraayo, 2016 Featured, Engineering, Microstation-Bentley, egeomates My
20 sano ka dib, waxaan kaliya la xiriiri karaa BIM sida isbeddelka ay mataleyso waqtigaas si aan uga tago guddiga sawirada iyo baafinta warqadaha faylasha CAD. Taasi waxay ahayd horumar layaableh, iyada oo la tixgelinayo inuu ka yimid farshaxan naqshadeeye iyo xisaabiyaha buug-yaraha + xisaabiye + Lotus 123. Waxay ila muuqatay wax la yaab leh aniga oo aaminay in aan loo baahnayn in mar dambe la masaxo masaxa iyo dhakada warqadda baafinta ka hor dib-u-habeyn, wax yarna ka beddelid qorshooyin badan oo ku saabsan isbedelkaas, ama ha tuurin nuqulada sepia ee asalka ah, taas oo kaliya u adeegtay in lagu sumeeyo calaamadda cas ee qorshooyinka sida loo dhisay ama laynka miiska dhisaha miiska.
Waa inaan qiraa inaan marwalba taageere u ahaa tikniyoolajiyadda, waxaan isticmaali jiray 8086 oo leh muraayad shaashad liin leh maalmihii DOS ceyriin. Si la yaab leh, waxay uga guurtay samaynta kaararka qiimaha halbeegga ee Lotus 123 illaa SAICIC 3 miisaaniyadda iyo qiyaasaha, waxayna ka soo gudubtay jadwalka jaangooyada SAICIC ee Microsoft Project 4 si loo xakameeyo waqtiga, in kasta oo ay ku jirtay liiska wali adeegsiga barnaamijka FoxBase ee LABA. Sababtoo ah ma jirin wax intaa ka badan, laakiin jabsiga 'EaglePoint' iyo 'SAICIC 4' maalmahaas waxay u dhowdahay wax aan macquul ahayn.
Wax walba way isbadaleen, markaan gacmaheyga kuqaatay AutoCAD, waqtigaas R13, oo wata Gateway 2000 PC, 133 Mhz Pentium I iyo 250 MB disk adag. Xaqiiqdii, waa xilliyadaas oo aan naftayda ku xidhi kari lahaa xafiiska keliya ee qaboojiyaha leh -kumbuyuutarka; Mana aha aniga-, oo waxaad ku baxdaa kuleylka habeenkii oo leh dhar qabow si aad u iibsato qado shukulaato Crunch iyo Coke.
Fuck Triglycerides ee waxtar yar.
BIM maanta waa aniga aniga oo muxuu yahay mid aan suurtagal ahayn markaan ahaa xirfad-yaqaanka teknoolajiyadda kaliya ee ku saabsan qalabixinta buug-gacmeedka -iyada oo aan anigu lahaa-.
Haddii kaliya ee aan lahaa AECOsim, design ee hordhaca ah ma loo baahan yahay samaynta Dakatu of dhise Ramiro watercoloured Bonilla, kuwaas oo kadis ah ahaayeen cajiib ah laakiin nasiib daro aan beddelmi karin, ee qabyada ah ee Building Main oo ka mid ah Bank ee Ciidamada Qalabka Sida ee Honduras, waxa la samayn lahaa hal mar oo ah CAD, simulating qaybaha kala duwan ee xisaabaadka qiimo badan si ay ula heshiiyaan fikradda «miisaan»Waxaa qoray Injineer Roberto López Carballo. Ansixinteeda ka dib, uma baahnin inuu maalmo u halgamo sidii uu u heli lahaa oggolaanshaha warshadda dhismaha, iyadoo ay la socoto silsilad muuqata ee Rudy iyo Rubén -maantana maan-doorasho- gaar ahaan, maxaa yeelay, mar geedka dhismaha horumariyo wuxuu lahaa in la sameeyo samir dayrka Engineer Dhismayaasha Boris Viscovich iyo dhadhan dhibsado waayo counterweights aflagaadeeyay, ku dhowaad aan macquul ahayn la meelaha ku haboon in qaybta hoose ee la dhigto ee mitir 2.50 ballaaran.
Iyada oo BIM ah, naqshadeynta waxay ku salaysan tahay goobo shaqeynaya, sida dhajiyeyaasha ay ku sameeyaan AECOsim, ku dhejisyada ku xiran template I-model, sidaa daraadeed injineerka dhismaha oo kaliya wuxuu ku ciyaaraa qiyaaso, wuxuu ku shaqeynayaa nuqul fedaraal ah oo isla DGN ah oo ku saabsan Bentley STAAD; iyada oo aan loo baahneyn in la soo celiyo injineerka Rivera, oo leh jadwalka daabacan ee joogtada ah oo raadinaya daqiiqado ah isugeyn heer sare ah.
BIM waxay u oggolaaneysaa horumarinta nidaamka qaboojiyaha in lagu sameeyo si is barbar socda, iyadoo la xakameynayo faragelinta hordhaca ah, iyadoo la kala saarayo birta birta iyo dogob la taaban karo, haddii ay lagama maarmaan noqoto in god laga sameeyo barta soo noqoshada, rubuca ama haddii kaarku aanu oggolaan doonin. Waxaan badbaadin lahayn adduunyo, ka dib markii aasaaska dib loo naqshadeeyay ka dib xaaladaha qoyaanka ee laga helay aagga wiishka, 5 mitir ka hooseeya qaybta hoose, taas oo macnaheedu yahay dib u fekerka darbiga daahyada iyo dib u qaabeynta aaladda aasaaska. Marka la isku daro BentleyRAM loogu talagalay lifaaqa birta, GEOPAK ee loo yaqaan 'topography' iyo 'Generative Components' ee naqshadeynta qalooca ee hoolka wuxuu noqon lahaa mid raaxo leh… iyo dhamaan feylka DGN ee lagu quudin lahaa heerka IFC on ProjectWise, ma ahan arrin ah in xafiiskeygu uu ku jiray Torres Valladolid de Comayaguela iyo in galabtii aan ku jiray inaan la dagaallamo fasalka laybereeriga waqtiga dhimashada ee jaamacaddayda.
Laakiin BIM waxay dhaafsiisan tahay qaabeynta naqshadeynta, waxaa sidoo kale ku jira jilitaanka habka dhismaha, waxaan xasuustaa waxa ku baxay go'aanka milatariga xilliyadaas in lagu doorto nooc ka mid ah agabyada loogu talagalay dhammaystirka, astaamaha diyaaradda deegaanku dhammaad ma lahayn; waxa aan ka dhihi doonin cusbooneysiinta eedeymaha dhintay ka dib markii ay go'aansadeen halkii ay ka raaci lahaayeen macmacaanka inay u guuraan marmar illaa heer toddobaad. Dalbashada qaabaynta BIM, waxaa loogu talagalay iyada oo la adeegsanayo walxaha nolosha dhabta ah, ama leh Revit ama AECOsim, waa inaad tiraahdaa kani waa gidaar, maaddadu macno malahan, laakiin haddii la qeexo waxaa la yiraahdaa waa dhisme la taaban karo, kaas oo qaadi doona 0.75 sintimitir qaro weyn, oo leh 1: 4 hoobiye, nuurad lime iyo midab biyo ku saleysan. Waa tan tan wanaagsan, uma baahnin inaan xisaab sameeyo, xisaabinta ka dib si aan u qiyaaso qiimaha, maxaa yeelay adoo adeegsanaya qalabka Naviswork, waxaan ku heli karaa miisaaniyadda si firfircoon iyadoo aan loo eegin isbeddelada nacasnimada ah ee dhadhanka xun ee kornaylada.
Marka naqshadeynta la dhammeeyo, waa inaad soo saartaa qorshooyinka dabaqa, qaybaha, wajiyada, adigoon u sameyn sidii hore, oo ay ku jiraan aragtida aragtida, ku darista lagu daro animations-ka cajiibka ah ee aan hadda qaadan doonin saacado wadahadal xarunta dhexe. Instituto de Previsión Militar, oo ay la socdaan guddiga cusub ee taliyayaasha ee mas'uulka ka ahaa ogaanshaha mar labaad dhammaan faahfaahinta mashruuca. Heerarka IFC hadda way oggol yihiin is-weydaarsiga iyadoon loo eegin haddii aan isticmaalo AECOsim (oo hore loo oran jiray Bentley Architecture) oo ay adeegsadaan AutoDesk Revit + Naviswork (oo hadda ay ku jirto inta ay le'egtahay). Marka, xakamaynta horumarka shaqooyinka uma baahna in la aado buugaagta xusuus-qorka ee Injineer Carlos Rosales, oo aan u dhigmin xisaabaadka Injineer Marisela, ee Fantasy Cowboy Palma, ama qoraallada Injineer Jessica Ortiz. Waxay ii badbaadin laheyd waqtiga qiyaasta ka baaraandegista, beddelka amarrada iyo xakamaynta horumarka ee MsProject.
Oh, iyo dabcan, BIM i badbaadin taasoo macneheedu yahay in ay ka danbeeyaan indhaha si taxadir ah injineerka Rosario, qiyaaso iyo qoraalana in uu buugga si faahfaahsan kasta si ay u qeexaan codsiyada ee mutuleel gaar ah foomamka Honduras, biraha ku fax naxaas ah inuu shirkadda Torogoz ee El Salvador, ama si gaara Seme samada ka yimid Miami oo ninna waxba kama oga oo weel Customs Puerto Cortes lumay.
Haddii aad u malaynayso in aad renderings la software CAD waa kama dambaysta ah, si aad u BIM jeedi Laabeen, maxaa yeelay waxa ay ka baxsan waxa ay horey u yeedhay AEC (Architecture, Engineering iyo Construction), AECO ku lug leedahay wareegga nolosha hawlgalka, ama Nolosha inteeda kale ee hadda taagan, 20 sano ka dib looma arko mashruuc injineer laakiin sida mashruuca dhaqaalaha -maadaama ay had iyo jeer ahayd-.
La Jadwalka BIM Waa meel fog, laakiin haddii aad wax ku guulaysan karto waxoogaa ah, fiiri Dib u noqo y AECOsim. Dhiirrigelinta ay igu keento waxay la mid tahay 20 sano ka hor, go'aanka nooca sumadda ah ee aan doorto ayaa looga tagayaa sidaad u jeceshahay.
Post Previous" Hore 2 toddobaad oo ah wada shaqeynta khariidadaha qiimaha Latin America
Post Next Model Domain Domain Model - Kiiska ColombiaNext »